Iifonti zamahala zamandulo nezobugcisa zamahhala, ungaphoswa | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukujikeleza apha sihlala sibona iifonti zesitayile segrunge, iifonti zoyilo olunzulu ngakumbi okanye iifonti ezintle, kodwa ndicinga ukuba lixesha elide okoko sinike ingqalelo kwiifonti zakudala zecalligraphy, enye yezona zibalulekileyo.
ICalligraphy ibikhona ubugcisa ngokwabo ukuziswa ngendlela yendalo yasimahla kwaye oko kubonisa neempawu ezithile zombhali. Ubugcisa obulahlekileyo ngenxa yokufakwa kwikhompyuter, izixhobo eziphathwayo kunye nezinye izixhobo zeteknoloji ezinokuthi ngenye imini zisenze silibale ukubhala ngesandla. Kulabo bafuna ukunika ubugcisa obuninzi ngakumbi kwiiblogi zabo, imisebenzi okanye iiwebhusayithi, ifayile ye- Iifonti zakudala ezingama-25 zokubhala Banokugqibelela.
Ayisiyiyo kuphela ikrafigraphy yobugcisa, kodwa i isithuba, ukulungiswa ngokulungelelaniswa kwaye ezinye izinto zichonge uninzi lweeleta ezafika kwidilesi yethu. Ubugcisa bokubhala obunezipho kunye neempawu ezilahlekileyo ngokuhamba kwexesha ukuze ukwazi ukusebenzisa nayiphi na iifonti ezingama-25 onokuzifumana kule posi kwaye ugcina umsebenzi omninzi, kuba ukwazi ukubhala ngale ndlela udinga ixesha, iinzame kunye nesandla esincinci.
Sikwamanye amaxesha kwaye Indaleko yinto engenakuphikiswa esingenakukuyeka Ngayiphi na indlela. Kuhlala kucetyiswa ukuba umntu abe nencwadana yokubhalela osondeleyo kuyo ukuze angakulibali ukuziqhelanisa nokubhala, ngaphandle kwento yokuba kuhlala kuluncedo kakhulu ukuba nayo yonke into.
Iifonti ezi-6 ezinomdla zokubhala ngobuhle bazo kwisitayile
Las Iifonti zakudala ze-25 zecalligraphy zikumgangatho ongaphikiswayo kwaye ndigcinele uninzi lwazo ukwenza umsebenzi ongaqhelekanga apho ndiza kubafuna khona, kwaye kungcono intaka esandleni ...
Enye yeFell Swoop
Iifonti zeskripthi sasimahla ezili-17
Ifonti kaBilly Argel
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » I-calligraphy endala
Uyilo lwecash-italente sitsho
Phendula kwi- Creatcash_f-talent
UAlejandro "Lechu" Cambra Herrera sitsho
Zintle kakhulu zonke, ndiyazithanda ^ - ^.
Phendula u-Alejandro "Lechu" Cambra Herrera
Cuauhtemoc uMauricio Garcia sitsho
Mva kwemini, iluncedo kakhulu enkosi kakhulu
Phendula kwiCuauhtemoc Mauricio Garcia
Ndifuna ifonti esemfanekisweni oyintloko endiyithandayo kodwa andiyifumani, ndincede x fa
Ndikhangela i-tcl graphite, ukuba umntu angandinceda ndingayixabisa.
Ndikwajonga ne-TCL graphite. Ngaba ungayifumana?
Izixhobo zoyilo zoMzobo wabaqalayo
Uyilo oluqinisekileyo lwe Windows 10 isinika umbono wokuba inokuba yintoni iprojekthi yeNeon